Halka uu ka yimid erayga siyaasad Carabi ahaan & Giriig ahaan + Waxa ay Soomaalidu u fahamtey | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Halka uu ka yimid erayga siyaasad Carabi ahaan & Giriig ahaan +...
(Hadalsame) 26 Sebt 2020 – Erayga “siyasad” ee aynnu Carabida ka soo qaadannay macnihiisii asalka ahaa waa jarabaridda fardaha, tarwiid. Nuxur ahaan Af Soomaaliga wax ay la mid tahay “xoolayn”.
Dhiilaha marka la tolo inta aan la gu dhaqmin horta waa la xooleeyaa, yacni waa la aslaa, la hogeeyaa oo la culaa. Mar dambe Carabtu eraygii wax ay u dalliciyeen maamulka talada bulshada.
Afafka Yurub eraygu wax uu ka yimid “polis” oo ah Giriig macnihiisu yahay magaalo. Waayo kumanyaal sano ka hor dunida waxaa ka jiri jiray dawlado magaalo keliya ah. Iyaguna eraygaas bay u gudbiyeen politika iyo politics.
Haddaba eraygaa aynnu soo amaahannay innaga maamul, magaalo iyo xoolayn midna innoo ma macneeyo ee wax uu inoo macneeyaa qabyaalad, tuugnimo iyo maalin taajirnimo.
Previous articleTurkiga oo ka mid noqday 6 dal oo samayn kara helakabtarro 100% maxalli ah + Sawirro
Next articleIsbarbardhigga cududda ciidan ee Somalia, Kenya & Itoobiya (Somalia oo meel uga fiican Kenya)